विश्व खेलकुदको महाकुम्भ ओलम्पिक शुक्रबारदेखि, सहभागी नेपालका पाँच खेलाडी को-को? « AayoMail
विश्व खेलकुदको महाकुम्भ ओलम्पिक शुक्रबारदेखि, सहभागी नेपालका पाँच खेलाडी को-को?
2021,22 July, 7:03 am
जापानमा आयोजना हुन गइरहेको ३२ औं गृष्मकालीन ओलम्पिक खेलमा नेपालबाट चार खेलका पाँच खेलाडीले प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्।
यही साउन ८ (शुक्रबार) देखि २४ गतेसम्म सञ्चालन हुने विश्व खेलकुदको महाकुम्भ ओलम्पिकमा नेपाललले एथ्लेटिक्स, सुटिङ, जुडो र पौडी खेलमा सहभागिता जनाउँदैछ। ३२ औं गृष्मकालीन ओलम्पिकमा एथ्लेटिक्समा सरस्वती चौधरी, सुटिङमा कल्पना परियार, जुडोमा सोनिया भट्ट र पौडीमा गौरिका सिंह र एलेक्स शाहले नेपालको चुनौती प्रस्तुत गर्नेछन्।
एथ्लेटिक्सतर्फ नेपालकी सरस्वती चौधरीले प्रतिस्पर्धा गर्दैछिन्। उनले एक सय मिटर दौडमा नेपालको चुनौती प्रस्तुत गर्न लागेकी हुन्। छोटो दूरीकी धाविका चौधरी युनिभर्सालिटी कोटामा ओलम्पिक खेल्न लागेकी हुन्। उनी साउन १५ गते मैदानमा उत्रनेछिन्।
सुटिङमा कल्पना परियारले नेपालको चुनौती प्रस्तुत गर्नेछिन्। उनले महिला १० मिटर एयर राइफलमा नेपालको चुनौती प्रस्तुत गर्ने भएकी हुन्। उनी वाइल्ड कार्ड प्राप्त गरेर टोकियो ओलम्पिकमा भाग लिन लागेकी हुन्। उनको खेल यही साउन ९ गते हुनेछ। उनले छनोट चरण पार गरे अन्तिम चरणको खेल पनि साउन ९ गते साँझ नै हुनेछ।
जुडोमा सोनिया भट्टले प्रतिस्पर्धा गर्नेछिन्। उनी पनि वाइल्ड कार्डको माध्यमबाट ओलम्पिकमा भाग लिन लागेकी हुन्। अन्तर्राष्ट्रिय जुडो महासंघले वरियताका आधारमा सोनियालाई ओलम्पिकमा सहभागिता जनाउन दिएको हो। १९ वर्षीय सोनियाले ४८ केजीमूनि तौल समूहमा नेपालको चुनौती प्रस्तुत गर्नेछिन्। उनको खेल पनि यही साउन ९ गते नै हुनेछ। पहिलो चरण पार गरे अन्य चरणको खेल पनि सोही दिन हुनेछ।
पौडीमा नेपालबाट एलेक्स शाह र गौरिका सिंहले सहभागिता जनाउँदैछन्। दुवै खेलाडी युनिभर्सालिटी कोटा (विश्वव्यापी सहभागिता) बाट ओलम्पिक पुगेका हुन्। नेपाली पौडी खेलाडी एलेक्सले पुरुष १ सय मिटर फ्रिस्टाइलमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्नेछन्। उनले साउन १२ गते पुरुष १ सय मिटर फ्रिस्टाइलको हिट चरणमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। एलेक्सले हिट चरण पार गर्न सकेमा साउन १३ गते अर्को खेल तथा त्यसमा पनि सफल भएको अवस्थामा फाइनल चरण साउन १४ गते प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्।
त्यस्तै जलपरी गौरिकाले महिला १ सय मिटर फ्रिस्टाइलमा चुनौती प्रस्तुत गर्नेछिन्। उनले अघिल्लो संस्करणको ओलम्पिक खेलमा सबैभन्दा कम उमेरकी खेलाडी बनेर चर्चा कमाएकी थिइन्। गौरीकाले यही साउन १३ गते महिला १ सय मिटर फ्रिस्टाइलको हिट चरणमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछिन्।
समग्रमा हेर्ने हो भने नेपालले ओलम्पिक खेलमा खासै उल्लेखनीय प्रदर्शन गर्न सकेको छैन। नेपालको प्रतिस्पर्धा भनेको सहभागितामा मात्र सीमित बनेको छ। ओलम्पिकमा नेपालले खेलेको १४ संस्करणसम्मको खेलको इतिहासलाई हेर्दा कुनै उपलब्धी हासिल गर्न सकेको छैन।
नेपालले सन् १९६४ मा जापानको टोकियोमै भएको १८ औं संस्करणको खेलबाट ओलम्पिक यात्रा सुरु गरेको थियो। हालसम्म नेपालका ८५ खेलाडीले ओलम्पिकमा सहभागिता जनाइसकेका छन्। तर कुनै पनि खेलाडीले पदक हात पार्न सकेका छैनन्।
यद्यपि, नेपालका तेक्वान्दो खेलाडी दीपक विष्ट र सङ्गीना वैद्यले भने ओलम्पिक खेलको छनोट प्रतियोगिता पार गरेका छन्। ओलम्पिकमा नेपालबाट हालसम्म आठ खेलमा प्रतिनिधित्व भएको छ। एथ्लेटिक्स, बक्सिङ, पौडी, तेक्वान्दो, भारोत्तोलन, सुटिङ, जुडो र आर्चरी खेलबाट नेपालले प्रतिनिधित्व गरेको हो। त्यसमध्ये ओलम्पिक यात्रा सुरु गरेयता एथ्लेटिक्स खेलको सहभागिता भने हालसम्म टुटेको छैन।
यसपटकको ओलम्पिकमा पनि नेपाली टोलीको लक्ष्य भनेको पदकभन्दा पनि आफ्नो व्यक्तिगत प्रदर्शन सुधार गर्नु नै हुनेछ। ओलम्पिक खेलका लागि पौडी, सुटिङ र जुडोका खेलाडी जापानको टोकियो पुगिसकेका छन् भने एथ्लेटिक्स टोली यही साउन ९ गते जापान प्रस्थान गर्नेछ।